ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာမြေ Witness ၏ Mudra ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
အဆိုပါ "မွကွေီးသကျသခေံ" ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘာသာများ၏အသုံးအများဆုံးအထင်ကရပုံရိပ်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဗုဒ္ဓကသူ့ရင်ခွင်၌, ဖြောင့်မတ်အုန်း, သူ့ဘယ်ဖက်လက်နှင့်အတူတရားအားထုတ်၌ထိုင်လျက်, သူ၏လက်ျာလက်ကိုမြေကြီးထိသရုပ်ဖော်သည်။ ဒါဟာဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဉာဏ်အလင်း၏ယခုအချိန်တွင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
အဆိုပါဖွင့်ရှေ့တော်၌ သမိုင်းဗုဒ္ဓ , သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမမင်းသား, သစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုသဘောပေါက်သောကြောင့်ဟုနတ်ဆိုး မာရ်နတ် ဟာဗောဓိပငျအောကျကသူ့ထိုင်ခုံကနေ Siddhartha ထိတ်လန့်ရန်မိကျောင်း၏ဗိုလ်ခြေများကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့်အကြောင်းကို-to-ဖြစ်ဗုဒ္ဓမရွှေ့ခဲ့ဘူး။ ထိုအခါမာရ်နတ်သည်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာအောင်မြင်မှုများ Siddhartha ရဲ့ထက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြသညျကား, မိမိအဘို့သစ္စာဉာဏ်အလင်း၏ထိုင်ခုံပြောဆိုထားသည်။ မာရ်ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စစ်သား "ငါသည်သူ၏သက်သေကိုဖြစ်ကြောင်းကို!", အတူတူအော်ဟစ် မာရ်သင်တို့အဘို့ပြောမည်သူကို Siddhartha-- စိန်ခေါ်?
ထိုအခါ Siddhartha ကိုမြေကြီးမထိရန်သူ၏လက်ျာလက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး, မြေကြီးကိုယ်နှိုက်က, ဟောက်သောအခါ "ငါသည်သင်တို့အားသက်သေခံ!" မာရ်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ နံနက်ယံကြယ်ပွင့်သည်ကောင်းကင်၌ထသည်အတိုင်း, သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမမင်းသားသစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးဗုဒ္ဓဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ iconography အတွက်တစ်ဦးက mudra အထူးအဓိပ်ပာယျနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားသို့မဟုတ်အမူအရာဖြစ်ပါတယ်။ မြေကြီးတပြင်သကျသခေံ mudra လည်း mudra အဆိုပါ Bhumi-sparsha ( "မြေကြီးတပြင်ကိုထိ၏အမူအရာ") ဟုခေါ်တွင်သည်။ ဤသည် mudra အခိုင်အမာသို့မဟုတ်ဇွဲကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါ Dhyani ဗုဒ္ဓ Akshobhya သူကိုအခြားသူများမှာအမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်ရွံရှာခံစားရရန်ဘယ်တော့မှသစ္စာစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ယိမျးမယိုကြောင့်စစွာမြေကြီးသက်သေကို mudra နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အဆိုပါ mudra ကိုလည်းလိမ္မာသောနည်းလမ်းများ (၏ပြည်ထောင်စုသင်္ကေတ upaya ကိုမြေကြီးထိလက်ျာလက်ကိုပုံဆောင်သည်), နှငျ့ဉာဏျပညာ ( prajna တရားအားထုတ်ရန်အနေအထားအတွက်ပေါင်ပေါ်မှာလက်ဝဲလက်ဖြင့်ပုံဆောင်သည်) ။
အများဆုံးဘာသာတရား၏တည်ထောင်သူပုံပြင်များကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. နှင့်ပရောဖက်ပြုဆောင်သောသညျကောငျးကငျဘုံမှတပါးသောဘုရားများနှင့်ကောင်းကင်တမန်များပါဝငျသညျ။ သို့သော်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်သဘောပေါက်ဗုဒ္ဓ၏သစ္စာဉာဏ်အလင်း, မြေကြီးကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၏သင်တန်း, ဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုအချို့သောပုံပြင်များတပါးသောဘုရားတို့ကိုကောင်းကင်သတ္တဝါဖော်ပြထားခြင်း။ သို့သော်လည်းဗုဒ္ဓသညျကောငျးကငျသတ္တဝါထံမှအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါဘူး။ သူကမြေကြီးတပြင်မေးတယ်။ ဘာသာရေးသမိုင်းပညာရှင်ကရင်အမ်းစထရောင်းကိုမွကွေီးသကျသခေံ mudra အကြောင်းကိုသူမ၏စာအုပ်, ဗုဒ္ဓ (။ Penguins Putnam, 2001, p 92) တွင် wrote:
"ဒါဟာမာရ်ရဲ့မြုံ machismo ၏ဂေါတမရဲ့ငြင်းပယ်ခံရသင်္ကေတကားဗုဒ္ဓအမှန်ပင်ကမ္ဘာကိုပိုင်ပါဘူးတဲ့လေးနက်တဲ့အချက်စေသည်သာ။ အဆိုပါဓမ္မအတိအကျဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သဘာဆန့်ကျင်ဘူး။ ။ ။ ။ သစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုရှာတတ်၏သူယောက်ျားမိန်းမ၌တည်ရှိ၏ ဝဠာ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူညှိ။ "
ဗုဒ္ဓဘာသာဘာမျှလွတ်လပ်စွာတည်ရှိကြောင်းသင်ပေးတယ်။ အဲဒီအစား, အားလုံးဖြစ်ရပ်အပေါင်းတို့နှင့်သတ္တဝါသည်အခြားဖြစ်ရပ်နှင့်သတ္တဝါတို့ကမတည်ရှိစေလျက်ရှိသည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏တည်ရှိမှုအလှနျမှီခိုသည်။ လူသားတွေအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုမြေကြီး, လေ, ရေ, အသက်ကိုရတတ်၏အခြားပုံစံများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်ထိုအမှုအရာအားဖြင့်အေးစက်နေသည်သကဲ့သို့သူတို့ကိုလညျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုများကအေးစက်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ - ကျောက်, ပန်းပွင့်ကလေးနှင့်လည်းကတ္တရာနှင့်မော်တော်ကားအိပ်ဇော - ကိုအသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်သူတို့ထဲကအသုံးအနှုန်းတွေရှိပါတယ်။ မြေကြီးသားဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဉာဏ်အလင်းကိုအတည်ပြုသည့်အခါတစ်ဦးသဘောနဲ့, မြေကြီးကိုယ်နှိုက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နှင့်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါငါး Dhyani ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်
Nirmanakaya - သုံးဗုဒ္ဓအဖွဲ့များတစ်ခုမှာ
အားလုံး Guru Nanak ၏ဘဝအသက်တာအကြောင်း
Kukai ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိခေါ် Kobo Daishi
အရွက်လောင်သောပင်ရောဂါ - ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း
စာရင်းအင်းများတွင် parametric နှင့် Nonparametric နည်းလမ်းများ
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Styles သင်ယူခြင်း
-A-Flat Fix: အံ့ဖွယ်ဒါမှမဟုတ်အိပ်မက်ဆိုး?
En နှောင့်နှေး - ပြင်သစ်ဖော်ပြမှုရှင်းလင်းချက်
နှစ်ဦး Element တွေကိုများ၏လုပ်ဒြပ်ပေါင်း
Cheerleader များအတွက်အားပေးစေရန်လှုံ့ဆော်ဂုဏ်ပြုပါရစေ - ဘတ်စကက်ဘော
ဝီလျံ Jennings Bryan ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ကျယ်လောင်စွာရှိတ်စပီးယားဆွေးနွေးပွဲ Read လုပ်နည်း
တော်ဝင် Troon ဂေါက်ကလပ်